WELDED WIRE MESH (Ejiri ya na ntinye nkwado ala)
Mesh ejiri na ngwa nkwado ala, nwere ike nye mkpuchi mkpuchi elu ka okwute dị n'etiti mkpọchi okwute na efere na ọrụ nke ogbunigwe, ọwara mmiri na mkpọda mkpọda. Ejiri ya na Split Set bolts na efere efere, ọ nwere ike ime ka sistemụ nkwado niile kwụsie ike na nchekwa.
Threadbar Bolt ejiri rụọ ebe a na -ejikọ ọnụ ma ọ bụ kpuchiri elu ụlọ yana ngwa na -egbochi ọgịrịga, yana profaịlụ elu ya nwere eriri, eriri eriri nwere ike inye ngwakọta resin na -ebuli elu na mbufe ibu. A na -ejikwa ya ebe niile maka nkwado ala na nsị, ọwara na ọrụ mkpọda
Roundbar Bolt nwere ngwụcha nwere eriri, enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma ma ọ bụ tụọ sistemụ arịlịka. Site na ụdị mkpụrụ akụ na asher dị iche iche, enwere ike ịwụnye ya ngwa ngwa wee yie ka ọ bụ otu n'ime ngwaahịa njikwa ala kachasị dị ọnụ ahịa na ụlọ ọrụ na -egwupụta akụ.
A na -ejikarị eriri “W” mgbe achọrọ nkwado ọzọ yana mesh na mkpọchi okwute. A na -adọkpụ eriri ụdọ ndị a n'ime elu okwute site na mkpọchi ma na -eme ka o kwekọọ na oke nkume. A na -ejikwa ya na ngwa nkwado ala ọkachasị na mpaghara dị oke egwu.